ANKADIKELY ILAFY Jiolahy 7 nirongo basy nanafika tokantrano
Fahitalavitra fisaka na “écran plat”, lelavola 200 000 ariary, solosaina fitondra mandeha na “ordinateurs portables” roa amin’ilay hika farany, finday avo lenta enina,
kara-panondro sy karatra fisintomam-bola amin’ny banky no lasan’ny jiolahy fito nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika, nanafika tokantrano iray teo Ankadikely, amin’ny fokontany Mandrosoa. Sasakadiny taorian’ny fanafihana mirongo basy poleta roa vao nahazo antso ny mpitandro filaminana avy ao amin’ny tobim-paritry ny zandary avy ao an-toerana ka tsy hita ny nanjavonan’ireo malaso.
Mitohy ny fanadihadiana, tamin’ny fotoana nanoratana ny vaovao, tsy mbola nisy tratra ireo olondratsy raha ny resaka nifanaovana manokana tamin’ireo mpitandro filaminana any ‘an-toerana. Tamin’ny sabotsy alina hifoha alahady teo no nitranga ny fanafihana, sahabo ho tamin’ny 11 ora sy sasany izay efa tao anaty torimaso tanteraka ny lasibatra sy ny mponina eo amin’ny manodidina teo amin’io Mandrosoa izay ao amin’ny distrikan’Avaradrano io. Ankoatra ny basy, nitondra zava-maranitra sy karazana vy famakiana trano koa ireo jiolahy. Nidina tany ifotony sy mandray an-tanana ny tohin’ny raharaha ny borigadin’ny zandary avy ao Ankadikely.